အင်န်ဇိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
လူသား ဂလိုင်အောက်စလေ့စ် ၁ (glyoxalase I)
အင်ဇိုင်း (Enzyme) များသည် သက်ရှိများအတွင်း ဇီဝဓာတ်ပြုမှုများ၌ ဓာတ်ပြုနှုန်းကို မြန်စေ နှေးစေသည့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးသော ပရိုတိန်းများ ဖြစ်ကြသည်။  အင်ဇိုင်းများ ဓာတ်ကူပြုပေးသည့် ဓာတ်ပြုမှုဖြစ်စဉ် မူလအစတွင် ပါဝင်သည့် မော်လီကျူးများကို စပ်စထြိတ် (substrate) ဟုခေါ်ပြီး ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ၎င်းစပ်စထြိတ်တို့သည် အခြား မော်လီကျူးများအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ သက်ရှိ ကလာပ်စည်း (ဆဲလ်) များအတွင်း ဓာတ်ပြုဖြစ်စဉ်များအားလုံးနီးပါး ထိုက်လျောက်သည့် နှုန်းထားအတိုင်း ဖြစ်ပွားစေရန် အင်ဇိုင်းများကို လိုအပ်သည်။ အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးသည် စပ်စထြိတ်အချို့အတွက်သာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဓာတ်ကူပေးသောကြောင့် ဆဲလ်များအတွင်း ရှိသည့် အင်ဇိုင်းများကိုမူတည်၍ ယင်းဆဲလ်တွင် မည်သည့် ဇီဝတွင်း ဖြစ်ပျက်မှုများ ဖြစ်ပွားမည်ကို အဆုံးအဖြတ် ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အင်ဇိုင်းသည် ဇီဝဖြစ်စဉ်များတွင် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် ပါဝင်သော အသားဓာတ်ဖြစ်သည်။ အများစုသော ဇီဝဓာတု ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စဉ်များတွင် အင်ဇိုင်းများပါဝင်သည်။ အင်ဇိုင်းများသည် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် လိုအပ်သော အသားဓာတ်များကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် ပါဝင်သည်။[လင့်ခ်သေ]
၁၉၆၈ ခုနှစ်ခန့် ကတည်းက အမျိုးအစားပေါင်း ၁၃၀၀ ခန့်ရှိသောအင်ဇိုင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာအရမူ အမျိုးအစား ၅၀၀၀ ကျော်ခန့်ရှိသော အင်ဇိုင်းများသည် အသက်ရှင်သန်မှုအတွက် လိုအပ်ကြောင်းသိရှိလာရသည်။ သွေးကြောများအတွင်းတွင်ပင် အင်ဇိုင်းအမျိုးပေါင်း ၉၈ မျိုးခန့်တွေ့ရှိရသည်။ အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးခြင်းစီတွင် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်သည် မွေးဖွားစဉ်ကတည်းက အင်ဇိုင်းများအား သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ အင်ဇိုင်းများသည်လည်း တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းလာသည်။ အင်ဇိုင်းများ ယိုယွင်းပျက်စီးလာခြင်းသည် အိုမင်းရင့်ရော်မှုဆီသို့ဦးတည်ပါသည်။
အင်ဇိုင်းများသည် လိုအပ်သော ကုန်ချောများကို ထုတ်လုပ်ပေးသောခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ စက်ရုံလေးများဖြစ်သည်။ စားသောက်လိုက်သော အစားအစာတို့မှ တစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော ဆဲလ်များ ၊ သွေး ၊ အရိုး ၊ ဟော်မုန်း နှင့် အခြားအရေးကြီးသော ကိုယ်ခန္ဓာ ဒြပ်စင် နှင့် ဒြပ်ပေါင်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အတွက် အင်ဇိုင်းများသည် အဓိကနေရာမှ ဓာတ်ကူပစ္စည်းများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
သို့ဖြစ်ပေရာ အင်ဇိုင်းများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတာဝန် နှင့် အင်ဇိုင်းတစ်ခုချင်းစီတွင် ၎င်းတို့၏ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ထားရှိပြီး ဖြစ်သည်။ အင်ဇိုင်းများသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာသောအခြေအနေတစ်ခုကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အင်ဇိုင်းများ လုံလောက်ပြည့်ဝစွာရှိခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်အား အကောင်းဆုံးသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွင် ထားရှိပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုလည်း ယုံကြည်ပါသည်။
အင်ဟစ်ဘစ်တာ (inhibitor) ခေါ် မော်လီကျူးများသည် အင်ဇိုင်းများ၏ စွမ်းဆောင်မှုကို နှေးကွေးစေနိုင်သည်။ အက်တစ်ဗေတာ (activator) ခေါ် မော်လီကျူးများမှာမူ ပိုမိုလျင်မြန်စေသည်။ ဆေးဝါး အတော်များများနှင့် အဆိပ်များမှာ အင်ဟစ်ဘစ်တာများ ဖြစ်ကြသည်။ အပူချိန်၊ ဓာတုဝန်းကျင် (ဥပမာ - pH တန်ဖိုး) နှင့် စပ်စထြိတ်ပမာဏများသည်လည်း အင်ဇိုင်း စွမ်းဆောင်မှုကို သက်ရောက်စေသည်။ အင်ဇိုင်းများကို စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပဋိဇီဝပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုတွင် အင်ဇိုင်းများကို လိုအပ်သည်။
↑ Smith AL (Ed); et al. (1997)။ Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology။ Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press။ ISBN 0-19-854768-4။ Explicit use of et al. in: |author= (အကူအညီ)CS1 maint: extra text: authors list (link)
↑ Grisham, Charles M.; Reginald H. Garrett (1999)။ Biochemistry။ Philadelphia: Saunders College Pub။ pp. 426–7။ ISBN 0-03-022318-0။ CS1 maint: multiple names: authors list (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်န်ဇိုင်း&oldid=699360" မှ ရယူရန်